Faa'iidooyinka baaskiil elliptical: mashiinka jir dhiska ugu dhameystiran | Ragga Stylish
Faa'iidooyinka tababaraha iskutallaabta sare
Miguel Serrano | | Ku habboon, Fitness
Ma taqaanaa waxtarka mootada elliptical? Beddelka xiisaha leh ee socda, mashiinkan waa qayb ka mid ah bixinta jimicsiyada badankood waxayna leedahay taageerayaal badan.
Mana aha wax la yaab leh in dadku ay ku tiirsanaadaan si ay ula qabsadaan, maaddaama ay bixiso jimicsi taas oo ah sida ugu fudud ee ay wax ku ool u tahay. Laakiin Aan aragno nooca faa iidooyinka aad filan karto haddii aad sharad ku sameyso tababarka si joogto ah baaskiil elliptical ah, haddii aadan horey u sameyn:
1 Waa jimicsi saameyn yar leh
2 Wuxuu xoojiyaa wadnaha wuxuuna ka hortagaa cudurada
3 Calorie gubanaya
3.1 Sidee looga takhalusaa caloosha
4 Waxaad shaqeysaa dhowr kooxood oo muruqyo ah
4.1 Calaamadee xusuustaada
Waa jimicsi saameyn yar leh
Si ka duwan orodka, jimicsiga mootada elliptical macnaheedu ma aha inaad dhulka timaaddo, laakiin dhaqdhaqaaqa waxaa lagu sameeyaa baydhalada qaarkood. Sidaa awgeed, waxay kaa caawineysaa yareynta saameynta jirka. Dhaqdhaqaaqa elliptical waa mid aad u xiiso badan kuwa ka weyn XNUMX, laakiin waa tayo qof walba ka faa'iideysan karo. Waa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad rabto inaad yareyso culeyska ku haya dhammaan kala-goysyada lugahaaga ku jira, iyo sidoo kale inaad ilaaliso qaybta hoose ee dhabarkaaga.
Marka la soo koobo, ficil ahaan waxay leedahay faa iidooyin la mid ah socodsiinta, laakiin way ka jilicsan tahay. Markaa isku day haddii aad raadineyso jimicsi jimicsi oo saameyn yar ku leh kala-goysyadaada. Waad u adeegsan kartaa inaad ku badasho socodsiinta ama isku darka labada jimicsi. Waa in la ogaadaa in, inkasta oo loo tixgeliyo jimicsi saameyn hooseeya, waxay ka caawisaa xoojinta jirka, gaar ahaan qaybta hoose.
Wuxuu xoojiyaa wadnaha wuxuuna ka hortagaa cudurada
Sida jimicsiyada jimicsiga oo dhan, tababar ku saabsan tababaraha elliptical wuxuu kordhiyaa garaaca wadnahaaga wuxuuna ka caawiyaa sambabadaadu inay ku shaqeeyaan awood buuxda. Xaaladdaani waa faa'iido badan u leh nidaamka wadnahaaga, yareynta halista cudurka wadnaha. Intaa waxaa dheer, wareegga dhiigga oo wanaagsan iyo yareynta caabuqa ayaa la gaaraa.
Tababbarka tababaraha elliptical wuxuu kaa caawin karaa inaad ka hortagto cudurro badan, oo ay ku jiraan dhiig karka, kolestaroolka, iyo nooca sonkorowga 2. Marka la soo koobo, dadka sharad ku sameeya layligan waxay ku raaxeysan karaan nolol ka dheer kuwa aan sameyn jimicsi nooc kasta ah.
Ma ogtahay in tababaraha elliptical-ka uu daawo weyn u noqon karo diiqada iyo diiqadda? Isboortiga waxaa loo muujiyey inuu wax weyn u leeyahay niyaddaada iyo caafimaadkaaga maskaxda, tababaraha elliptical-ka ayaa sidoo kale ka reeban Sidaa awgeed, haddii aad soo martay wakhtiyo fiican marka ay timaado niyadda iyo heerarka tamarta, oo ay ku jiraan mashiinkan ku jira nolol maalmeedkaaga ayaa qayb ka noqon kara xalka.
Haddii aad u baahan tahay inaad miisaankaaga dhinto ama aadan doonayn inaad miisaanka kordho, waxaad xiisayn doontaa inaad taas ogaato tababaraha iskutallaabta elliptical ayaa kaa caawin kara inaad gubto kalooriyo badan. Waad ka takhalusi kartaa 400-500 kaloori nus saac oo tababar ah, taas oo aan haba yaraatee wax xun ahayn. Caadi ahaan, waad waayi kartaa xitaa inbadan haddii aad u baahato. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad kordhiso xawaaraha ama muddada tababarkaaga baaskiil ee elliptical. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa tababarka mudada, taas oo ku lug leh kala-goynta xilliyada xoogga badan. Hadaad baaskiil elliptical waxaa ka mid ah barnaamijyada, ha ka waaban inaad isticmaasho kuwa aad aadka u xiiseyneyso.
Sidee looga takhalusaa caloosha
Fiiri maqaalka: Dhexda iska yaree ragga. Halkaas waxaad ka heli doontaa talooyin badan oo aad dib ugu soo laabanayso dhexdaada sidii ay ahaan jirtay, wax ay tahay in lagu bilaabo gubista kalooriyo ka badan inta aad cunayso.
Waxaad shaqeysaa dhowr kooxood oo muruqyo ah
Waxaan aragnay faa iidooyinka ku saabsan socodsiinta, laakiin ka warran mashiinnada intiisa kale? Marka loo barbardhigo baaskiilka taagan, waxay bixiyaan jimicsi dhameystiran. Tani waa sababta oo ah baaskiilada elliptical kuu ogolaanayaa inaad jimicsi ku sameyso jirka oo dhan (qeybta hoose iyo sare) mahadsanid xaqiiqda ah inay ku jiraan labadaba baaldiyo iyo baararka taagan. Marka ay timaado mashiinnada jimicsiga ee kuu oggolaanaya inaad la shaqeysid kooxo muruqyo badan isku mar, tababaraha elliptical waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican, haddii uusan ahayn kan ugu badan.
Marka lagu daro kaa caawinta inaad gubto kalooriyo badan, dhaqaajinta baararkaas inta lagu jiro jimicsigaagu waxay kaa caawineysaa xoojinta iyo codka jirkaaga sare sidoo kale. Mid ka mid ah waxtarrada mootada elliptical-ka ee leh culeys badan markii aad u dooranaysid habka tababarka ayaa ah inay kaa caawinayso inaad dhigto quadriceps-kaaga, muruqyadaada, murgacashadaada, dhejiskaaga, dhabarkaaga, triceps iyo biceps inay shaqeeyaan. Si aad si siman ugu dhawaaqdo muruqyadaada sare iyo hoose, hubso inaad si siman ugu qaybiso dadaalka baallooyinka iyo baararka., ama maxaa lamid ah, inta udhaxeysa lugaha iyo gacmaha.
In kasta oo ay kaa caawinayaan inaad wax badan ka hesho tababarka wadnahaaga, iyagu ma aha kuwo beddelaya tababarka xoogga. Khubaradu waxay talo ka bixiyaan ugu yaraan laba kalfadhi oo miisaan qaadis toddobaadle ah.
Fiiri maqaalka: Jimicsiyo lagu xoojinayo qaddiyadaha. Halkaas waxaad ka heli doontaa jimicsiyada ay tahay inaad ku darto tababarkaaga si qaybtaan muhiimka ah ee jirkaagu u noqdaan kuwo adag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Faa'iidooyinka tababaraha iskutallaabta sare
Sida loo wanaajiyo feejignaanta